Posted by ဇနိ at 6:04 PM
PAUK December 28, 2008 at 6:14 PM
Craton December 28, 2008 at 6:22 PM
ကွိကွိ.. မကြီးပေါက်က Marketing ကို ဒီအထိလာဆင်းတယ်ဗျို့။ အန်ကြီးကိုလည်း အလကားကျွေးရင်လာစားမယ်။း)
ဦးဦးနိက ဘာတွေပြောမှန်းရဲမတိ။ ဒေါ်ဒေါ်နိရှက်စ်နေရော့မယ်ကွယ်။ လိုချင်တာရပါဂျေနော်..။း)
အမြန်ဆုံးတက်ဂ်ကြွေးဆပ်လို့လည်း နှစ်ယောက်လုံးကို အာဘွားအကြီးကြီးပေးလိုက်ကြောင်းပါ။
လင်း December 28, 2008 at 8:04 PM
ဘု၊ စု ၊ ခရု ပြီးရင် နောက်ဘာပေးကြမလဲ ။
စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေ အမြန်အကောင်အထည်ပေါ်ပါစေ။ ပေကပ်ကပ်လုပ်နေရင်
လွိုင်လင် December 28, 2008 at 8:35 PM
ဟုတ်တယ်။ ၂ယောက်နည်းတယ်။ တီးဝိုင်းတစ်ဝိုင်းစာ ၅ ယောက်လောက်တော့မွေး။ ဘောလုံးအသင်း တစ်သင်းစာတော့ မပြောတော့ပါဘူး။
စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အထဲမှာ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေကို အိမ်မှာ ဖိတ်ကျွေးမယ်ဆိုတာရော မပါဘူးလားဟင်။ :D
အောင်သာငယ် December 28, 2008 at 9:01 PM
လင်း ပြောတာ သဘောတူပါသည်... (ကားတင်ပြေ...)..း)
ကလေး ၂ ယောက် (သားတယောက် သမီးတယောက်) ဆို လုံလောက်ပါသည်... အများကြီးမွေးလျှင် အများကြီး အလုပ်လုပ်ရလိမ့်မည်...း)
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျား...
မေအောင် December 28, 2008 at 9:13 PM
ThuHninSee December 28, 2008 at 9:22 PM
စိတ်ကူးယဉ်တာကလဲ အမိုက်စား။ ငါးယောက်ဆို
ဘု၊ စု ၊ ခရု၊ပု၊တု ပေါ့။ တူ၊တူမလေးတွေကို လာတွေ့မယ်။
tg.nwai December 28, 2008 at 10:56 PM
အိမ်မှာ လာဖွသွားပြီးမှ.. ဒီရောင်စုံပို့စ်လေးကို ကျော်သွားတာ ဆောရီး..
တယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်လေးပဲ..။ ကလေးက နှစ်ယောက်ဆို နည်းတယ်.. ကိုနိ အိုင်ဒီယာကောင်း၏..နောက်တစ်ခါမှ အမွှာလေးမွေး..
မွန် December 29, 2008 at 1:49 AM
သြော် ကိုနိတို့ မမနိတို့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်လေးထဲမှာ ဖတ်ရင်းရောပြီးပျော်လို့
အပြင်ထွက်စားမယ်လို့သာ စိတ်ကူးယဉ်တာပါ မမနိလက်ရာတွေနဲ့ ကိုကိုနိကြီးက အပြင်စာတွေမစားချင်ပါဘူးနိနိရယ်လို့ ပြောမှာမြင်ယောင်သေးတယ်
သားလေးသမီးလေးတွေအတွက် ကလေးစာပေးလေးတွေ စာကြည့်ခန်းထဲထည့်လို့ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးနေရာရောက်တော့ အရမ်းကိုအားကျမိတယ် ကလေးတွေကိုရော လူကြီးနှစ်ယောက်ကိုရောပဲ
sonata-cantata December 29, 2008 at 3:35 AM
ကိုဇနိစိတ်ကူးနဲ့ မဇနိစိတ်ကူး တစ်ထပ်တည်းဖြစ်မှာ သိနေတယ်လေ...
sin dan lar December 29, 2008 at 4:28 AM
ဒုတိယအမွှာမှာ ခြောက်မွှာပူး ဖြစ်သွားသော်...............
မောင်မျိုး December 29, 2008 at 4:45 AM
ဟီး...အားကျစရာကြီး အမွှာလေးဆို တော်၂ချစ်ဖို့ကောင်းမှာ ကိုနိနဲ့တူတာတစ်ယောက် မမနိ နဲ့ တူတာတစ်ယောက်ပေါ့နော့်း) စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေဗျာ။
May Moe December 29, 2008 at 11:03 AM
အမွှာလေး၂ယောက် ပြီးရော :)
nu-san December 29, 2008 at 4:51 PM
ကိုဇနိနဲ့ မဇနိ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အထဲမယ် အမတို့ကို မုန့်ကျွေးတာလည်း ပါဘူးတော့.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ.. သားသားမီးမီးတွေ အများကြီးနဲ့ ပျော်စရာမိသားစု ဘ၀ကို အမြန်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ.. အမွှာယူမယ်ဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့....ဟိုဘက်အဖိုးအဖွားအိမ် တစ်ယောက် ဒီဘက်အဖိုးအဖွားအိမ်တစ်ယောက် ပို့ပေးထားရင် ပြီးပြီနော့.. မကောင်းဘူးလား.. :)
khin oo may December 29, 2008 at 5:36 PM
အပြောထက် လက်တွေ့အရေးကြီးသည်. ကိုနိ..လက်မြန်ပါစေ...။
Moe Cho Thinn December 30, 2008 at 8:48 PM
သား + သမီး တပြိုင်နက် မွေးစေ..
ဟန်းနီးမွန်းသွားရင် အမလဲ ကပ်လိုက်ပါရစေ..
သက်ဝေ December 31, 2008 at 6:50 AM
New Year မတိုင်ခင် Template ကို ပြောင်းလိုက်တာ
သက်ဝေ December 31, 2008 at 6:52 AM
စချင်ဇောနဲ့ဆုတောင်းဖို့ မေ့သွားတယ်..
ကိုနိနဲ့နိနိတို့စိတ်ကူးတွေ အားလုံး မြန်မြန် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ပါစေ...
လိုရာဆန္ဒတွေ အားလုံးပြည့်စုံပြီး ပျော်စရာ ၂၀၀၉ ဖြစ်ပါစေ...
မောင်ဖြူ January 2, 2009 at 4:27 PM
yaungyin gyi tway lar yin, bel lo pyu su mel so tar lel, sate kuu yin ohn lay byar. :D